Gbuo egbu egbu na ubu | Igbu egbugbu
Ghaa egbugbu na ubu
Maria José Roldan | | Egbugbu
A na-egbu egbu egbu egbu egbu nke ukwuu site n'aka ndị nwoke na ndị nwanyị n'ihi ịma mma ha na ntụgharị. Enwere ike ime egbugbu egbugbu na nha dị iche iche, ọ bụrụhaala na imepụta atụmatụ ahụ, nha na ebe a ga-etinye ya. E nwere ndị na-ahọrọ igbu egbugbu na nwa na ọcha, obere na ebe mara mma, ndị ọzọ na-ahọrọ ha buru ibu ma nwee agba.
Ogbugbu egbugbu nwere ezigbo ihe ọ pụtara maka onye ọ bụla. Dị ka ọ na-adịkarị, ha na-egosipụtakarị nnwere onwe site n'eziokwu na ọ bụ nnụnụ na-efe efe ma nwee ike ịga ebe ọ bụla ọ chọrọ, n'otu oge ahụ, ọ na-egosikwa ịhụnanya ebighi ebi. Ihe ịhụnanya ebighi ebi pụtara bụ n'ihi eziokwu ahụ bụ na n'agbanyeghị nnwere onwe ha n'ihi nku ha, mgbe ha na-ahọrọ onye òtù ọlụlụ ha na ya ga-anọ ruo mgbe ebighị ebi.
Agbanyeghi na ihe ichoro inye egbugbu gi ilo ga-adaberekwa n’ihe ha putara n’ebe ị nọ ma ọ bụ ịbụ onye nnụnụ ndị a dị ntakịrị ma maa mma nweworo na ndụ gị. Naanị gị ga - amata ihe pụtara gị kacha mma na ahụmịhe gị biri. Choose na-ahọrọ!
Ọ bụrụ na ọ na-amasị gị ilo, ọ karịrị karịa igosi na ị chọrọ igbu ebe ha bụ ndị protagonists, n'ezie! Ma olee ebe kachasị mma n'ahụ gị iji gbaa egbugbu? Nke ị chọrọ n'ezie. Ọ bụ ezie na enwere ebe na-amasịkarị ọtụtụ maka ngwa anya ọ na - akpata: ubu.
Ubu bu oke ebe iji egbusi egbugbu na efe efe n’ihi na o gha adi ka o n’efeghari n’anu aru gi. Ọ bụrụ n ’igbu egbugbu gị n’ubu gị, ihe kachasị mma bụ ime ya na agba yana iji nweta nkọwapụta kachasị elu, n’ihi na otu ahụ ị ga-esi nwee ọ enjoyụ n’ezie.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Igbu egbugbu » Egbugbu » Ghaa egbugbu na ubu
Anyị na-achọpụta gị egbugbu ọhụrụ nke Thaila Ayala, onye na-eto eto Brazil na ihe nlereanya
Onye Chepụtara Pierkpọpu